November 3, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Real Madrid oo guul ka gaartay Inter & guud ahaan natoojooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray Champions League… + SAWIRRO
Cayaaraha November 3, 2020
(Yurub) 04 Nof 2020. Waxaa caawa la ciyaaray ciyaaro aad u xiiso badan ee ka tirsan kulamada saddexaad wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2020/21. Kooxda Real Madrid aya guusheeda ugu horeysay olalheeda wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2020/21, ka gaartay naadiga Inter Milan, kaddib markii ay kaga Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan ee Champions League oo la shaaciyey
(Madrid) 03 Nof 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan ee tartanka UEFA Champions League ayaa la shaaciyey. Kooxda Real Madrid ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Inter Milan si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada saddexaad wareega group-yada ee tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan 2020/21. Waxaa la shaaciyey […]Sii akhriso
Ciyaaryahan kooxda Real Betis ah oo weerar xoogan ku qaaday Ronald Koeman
(Spin) 03 Nof 2020. Kabtanka kooxda Real Betis ee Joaquín Sanchez ayaa weerar xoogan ee Afka ah ku qaaday tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman, kahor kulanka ay labada kooxood ku wada ciyaari doonaan Sabtida horyaalka La Liga ee dalka Spain. Joaquín Sanchez ayaa wuxuu ka soo hoos ciyaaray Ronald Koeman xilli ciyaareedkii 2007/08, xilligaas oo […]Sii akhriso
Masjidkii ugu horeeyey oo laga furay magaaladda Athens ee caasimadda dalka Giriiga
Soomaaliya November 3, 2020
Muqdisho (SONNA)-Masjidkii ugu horeeyay ayaa laga furay magaaladda Athens ee caasimadda dalka Giriiga ka dib 14-sano oo muran iyo dib-u-dhac xagga maamulka ah uu ku yimid. fiidnimadii Isniinta la soo dhaafay ayaa salaadii cishaha ee ugu horreysay ayaa lagu oogay masjidka iyada oo la raacayo tallaabooyin looga hortagayo cudurka COVID-19’ Dad Sii akhriso
Wasiirka Amniga XFS iyo Danjiraha Cusub Denmark oo Muqdisho ku kulmay “Sawirro”
Muqdisho (SONNA)- Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xundubey Jimcaale ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulmay Danjiraha cusub ee Denmark ee Soomaaliya Mudane Ole Thonke. Labada masuul ayaa intii kulankooda uu u socday waxey ka wada-hadleen arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka Denmark ay la leedahay Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda Sii akhriso
TERMS OF REFERENCE – End- Term Evaluation Project – Reducing Sexual Exploitation of Girls in Bahir Dar in Ethiopia
Shaqooyinka November 3, 2020
Country: Ethiopia Organization: Terre des Hommes Netherlands Closing date: 13 Nov 2020 Intervention Details: Title Reducing Sexual Exploitation of Girls in Bahir Dar Project in Ethiopia Goal To contribute to reduction of the incidence of commercial sexual exploitation of girls in Bahir Dar town and surrounding areas. Objective/s Girls at risk of/victims to CSEC are […]Sii akhriso
Ra’iisul wasaare Rooble “Haloo gurmado dadkii ay saameeyeen Roobabkii ka da’ay Muqdisho”
Muqdisho (SONNA)-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa muujiyay sida ay ula xanuunsanayaan dadka Soomaaliyeed ee waxyeelladu ka soo gaartay roobabkii maalmihii tagay ka da’ayey Muqdisho. Ra’iisul wasaare Rooble oo ka hadlayey shirka banbaxa golaha wasiirrada ee maanta ka bilowday muqdisho, ayaa faray Sii akhriso
Wasiirka Shaqada XFS oo Muqdisho ka furay kulan ku saabsan siyaasadda ilaalinta Bulshada+Sawirro
Muqdisho (SONNA)- Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay inuu diiradda saarayo sidii guul looga gaari lahaa hayaanka dhimista saboolnimada iyo koritaan loo siman yahay. “Waxaa sharaf u ah dawladda iyo dadka soomaaliyeed , maanta inan joogno tallaabooyinkii u horreeyay ee aan ku gaareyno Sii akhriso
Wasiirka Amniga Gudaha XFS oo la kulmay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya+Sawirro
Muqdisho (SONNA)-Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Danjire Xasan Xundubey Jimcaale ayaa booqday safaaradda Turkiga ee Soomaaliya, waxaana ku soo dhaweeyay safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Mohamed Yilmez. Labada mas’uul ayaa kulan ay ku yeesheen safaaradda Turkiga ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho kaga Sii akhriso
Galmudug oo dhismaha Dekadda Hobyo heshiis kula gashay shirkadda Oriental “Sawirro”
Muqdisho (SONNA)-Dowlad goboleedka Galmudug ayaa heshiis la saxiixatay shirkadda Oriental Company oo ay ku mideysan yihiin seddex shirkadood oo Turki, Ingriis iyo Soomaali isugu jira oo ku howlan dhismaha Dekedda Hobyo. Heshiiska waxaa dhanka Galmudug u saxiixay Wasiirka Dekedaha iyo Kalluumeysiga, Cabdisabir Nuur Shuuriye, halka dhinaca Bariga ay u mataleen Crom LTD, Sii akhriso